Satinina ny masoandro voaroaka sy ny fiekem-pino Satin Martin Vrijland
Home » ankapobeny » Satinina ny masoandro voaroaka sy ny fiekem-pino Satin
Satinina ny masoandro voaroaka sy ny fiekem-pino Satin
Navoaka tamin'ny May 15, 2014 ao ankapobeny, Ny sata satriny |
fampitandremana: Sandan'ny isa tsy hita isa nifanena tamin'ny /home/martinvrijland/public_html/archief/wp-content/plugins/social-warfare/functions/social-networks/twitter.php amin'ny tsipika 106
Miorina amin'ny lahatsoratra teo aloha momba izany Ny angano Ejiptiana en Conchita Wurst ary ny fanompoam-pivavahana an'i Satin tao amin'ny tandindona ho hita manerana izao tontolo izao dia nahazo fanehoan-kevitra marobe aho. Maro ireo olona manontany tena hoe "Ahoana no ahazoanao izany fahagagana izany?"Ny hafa dia manamarika fa manao fahadisoana momba ny fivavahana amin'ny masoandro aho. Ny Farao Akhenaton sy ny vadiny Nefertiti dia tsy hanompo an'i Satin, fa te hampiditra masoandro sy monotheism. Io farany io dia hametraka ny fototry ny monotisma ao amin'ny Baiboly. Hiverina any amin'ny antsipiriany aho, fa te hamporisika anao hanao fianarana samirery.
Mamelà ahy hanomboka amin'ny fanondroana an'i Santos Bonacci, mpikaroka iray izay manome famintinana mahafinaritra ao amin'ny lahatsary YouTube etsy ambany. Na dia tsy te-hilaza fa mampifandray 100% ho an'ny mpikaroka hafa rehetra hoe: Izaho afaka manome tari-dalana izay matanjaka ny tsipika ny hevitra mandeha amin'ny alalan'ny lahatsary eto ambany.
Santos Bonacci dia manondro ny famintinany ny tetikasa Thunderbolts. Ireo mpikaroka avy amin'ity tetikasa ity dia manome fanazavana misimisy kokoa momba ny angano fahiny sy ny fiovan'ny planeta eto amin'ny tantaran'ny tany. Ao anatin'izany koa ianao dia mahita ny fanazavana momba an'i Satin. Amin'ny lahatsoratra manaraka dia tsy maintsy hiverenako any amin'ny sekta Satin na ny fototry ny ankamaroan'ny fivavahana eran-tany, ny tsiambaratelon'ny fikambanana miafina sy ny satanisma (izay kolikoly ao Saturn). Jereo ity fanadihadiana manaraka ity:
Ary rehefa vitanao izany rehetra izany, anontanio ny antony mahatonga ny masoandro mainty matetika aseho, resahina ary mihira, toy ny ao amin'ny number Soundharden etsy ambany. Ho an'ireo izay tsy dia tsara loatra amin'ny teny Anglisy, dia hiezaka hamintina izany amin'ny lahatsoratra manaraka aho.
All Shares 41
janvl / May 15, 2014
Martin, faly aho fa manoratra lahatsoratra indray avy amin'ny hery tsaranao manokana ianao fa tsy amin'ny tsy fahasalamana manoloana an'i Micha Kat raha marina ianao na tsia. Misaotra anao !!
Foana aho matetika tojo amin'ny Saturn an'ohatra eo amin'ny raharaham-barotra (orinasa Logo) ny mozika / haino aman-jery (MTV loka mampiseho, Ziggo Dome, haino aman-jery tranom-bakoka, vredenburg vaovao sns), ny fanabeazana (akanjo sy ny trano fonenan'ny mpianatra Utrecht), ny lalàna (akanjo, ny fivavahana dia na aiza na aiza !!
Ambony fa handeha hamotopototra izany ianao - tena tsy ampy ny fikarohana ao amin'ny media (alt).
Chris / May 15, 2014
Ny lahatenin'i Santo dia manan-danja tokoa raha tiantsika ny hahatakatra bebe kokoa ny fanavaozana izay tsy maintsy notsongaintsika tamin'ny anaran'i Satanic
Cult (kult-uur ...?) Ireo famokarana rehetra manodidina antsika dia famelan-keloka ara-bakiteny ho fanohanana an'ity mindfuck ity, mamela ny Frantsay ahy.
Olona sarotra izao, mitazona ny fonao ary mampahafantatra ny tenanao.
Misy ihany koa ny ampahany 2 amin'ity fampisehoana herinaratra ity.
Ary indray Chapeau noho izany!
Waterman / May 15, 2014
Lahatsoratra tena mahaliana an'i Martin.
Manaja ny Santos Bonacci ihany koa, izay mitaky ny fahasarotam-pahefana hamaha ity olana ity.
Mahitsy amin'ny hevitro amin'ny teboka maro.
Ny anarana hoe Jesosy izay antsoin'ny Kristianina maro koa.
Saingy Santos Bonacci dia tsy mandeha lavitra loatra amiko.
Raha ny finoana dia miahy ny tontolo kristiana:
Ao am-pony, ny olona dia mahafantatra fa Jesosy no mpiandry tsara.
Saingy ny ankamaroan'ny Kristianina dia tsy mieritreritra ny hamantatra raha marina ny anarana hoe Jesosy.
Izany no niantombohako nanomboka roa taona lasa izay mety ho anarana tany am-boalohany momba ny Mesia.
Ary teo aho dia nahita ny anarana hebreo Jahshua.
Midika izany fa manavotra an'Andriamanitra na mamonjy an'i Jah ianao.
Avy aiza anefa ny anarana hoe Jesosy?
Koa, dia misy fanadihadiana maromaro natao fa tsy mbola tanteraka ben.Ik tsy misy olona te-tena handratra ireo, satria fotsiny mba hanadihady ny tena anaran 'ny Mesia, fa tsy ny zavatra ataony na mbola Heef dia midika hoe ny ny olombelona rehetra eto an-tany.
Ny iray amin'ireo fikarohana ireo dia izao:
Lin Housman / May 15, 2014
@Waterman: Raha mbola fantatro, Jesosy / Jesosy no teny grika amin'ny teny hebreo Jahshua izay antsoinao. Ao amin'ny Testamenta Taloha izany anarana izany tany isan-karazany rehetra kolikoly ny anarana Yehoshuah, ohatra, i Josoa (izay nandimby an'i Mosesy no nitarika ny Israelita araka ny fifindra-tantara tany an-efitra), Isaiah (ny mpaminany) ary Jese (ny rain'ny Davida mpanjaka izay nilaza ny Mesia ho ateraky ny naterany, dia jereo ny Isaia 11: 1).
Ao amin'ny Testamenta Vaovao, nosoratana tamin'ny teny grika, ny anarana (Yehoshuah sy ampy anarana) teny ho Iesous, izay efa be tahaka an'i Jesoa.
Dia toy ny hoe izaho ihany no anarana.
Avy amin'ny angano grika dia betsaka ny hita fa nanompo sampy.
Ny Grika, ohatra, dia nanova ny anarana hebreo tany am-boalohany ho an'ny apostoly ary ny andro Sabata fitsaharana dia nandalo ny andro fitsaharana amin'ny alahady. Izany no mahatonga ny fanompoam-panaovana masoandro ary ny firehetan'ny Phoenix izay te-hiakatra amin'ny masoandro.
Tsarovy ihany koa ny asan'ny otika sy ny fanompoan-tsampy amin'ny lalao Olaimpika, izay niandoha tany Olympia / Gresy fahiny.
Nataoko tao 2002 ny tongotro ary nitsidika tranombakoka maro tao izy ireo. Ny sary sokitra rehetra sisa tavela amin'ny olona izay nanolotra ny tenany hiankohofana.
Indro, ny didin'i 10 an'i Jehovah / Andriamanitra dia tsy sarotra loatra hianarana sy hiainana.
Raha mamaky azy ireo ianao dia tsara izany.
Fa ny didy iray dia mazava ho azy.
Ary izany dia tsy hanao sampy intsony.
Tokony ho hitanao fa misy sampy maro eran-tany.
Satanic World 666 Fampitandremana! 666 Anywhere You Look !!!!
pejy / May 15, 2014
Ve ny rohy mbola tsy nijery, fa ny "anay" amin'ny anaran'i Jesosy tamin'i Roman, ka ny ampahany voalohany hebreo, romanina fizarana faharoa, toa an'i Paoly, i Petera, i Lazarosy, Kornelio, etc.
MineurF / May 15, 2014
Manana frequencia ihany koa i Saturn (ny fanoratana dia eo am-baravaranao).
Ny peratra tantara hafa dia misy ny asa atao any amin'ny vava vola nahita izay zavatra toa artifisialy.
Ny satamita ho toy ny metaly anteneran'ny mega dia hitako fa azo ekena.
trebor2110 / May 16, 2014
ny feon'i Saturn
ary ireo avy amin'ny Jupiter
Ary matetika dia misy feo hafa ???? Saingy ny feon'i Uranus
MineurF / May 16, 2014
Ny fihenan'ny fahagagana voalohany dia ambany ho an'ny fihainoana olona ary naverina haingana.
I Jupiter dia manome toeram-pialan-tsasatra iray raha ny tononkira malefaka an'i Satinàna kosa dia misy zavatra manintona.
Ny fihenan-tsofina toy izany dia mety hahatratra ny tany ary mety hisy vokany.
schnijder / May 16, 2014
Dia manamafy fa ny fivavahana rehetra sy ny fanehoana an'ohatra ny andriamanitra, demigods, planeta Saturne ny vava vola aminy, ary dia fitaovana tena mamohehatra sy feno fitiavan-tena psychosociopatoide, tsy nanam-piarovana fiaraha-miory ny olona hahatsapa zava-dehibe, ary indrindra fa ny asany mba hanome saosy mihoatra ny natoraly izay heveriny ' olo-marina "(miala tsiny fa tsy ny tsara fotsiny teny)!
Koa nihevitra fa izany ny vahoaka (ny ondry omby) Te hiseho amin'ny (nangalarina) hery.
Raha fintinina, amin'ny ankapobeny no iantsoako azy rehetra: finoanoam-poana.
Izany tokoa no lazain'ny Baiboly ny fanompoana ny Mammon sy ny fanaovana sampy.
Chris / May 16, 2014
Ny iray amin'ireo 'nianatra ny "mpahay siansa tapaka Katolika ... tsara izay tsy dia aoka KOA:
Ary naniraka mg faobe ny zanatsika sy ireo mpiara-belona eny? Simika mpamono olona, ​​miaraka amin'ny nasty molotov ny virosy izay nanitatra teo amin'ny rivotra, sy ny sisa, ary ny andia ny syringes fa na dia zaza vao teraka?
Olona maro no (mbola!) Deep in coma, ny zavatra rehetra noheverina.
Waterman / May 17, 2014
David Icke: Voala (R $ E)
Faritr'i Of Saturn
Ny tara-pahazavan'ny NASA - Ny fanimbana tsy misy fiafaràn'ny NWO
Jmdp / Oktobra 10, 2014
Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra, na ilay andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha. Izany no fahadisoana lehibe indrindra, !!! Izany no mahatonga antsika rehetra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ny zavatra rehetra fantatsika momba ny fivavahana.